Manjaro inoshandura chimiro chayo kupindura kunetso yekuzivikanwa kwayo | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro inoshandura dhizaini yayo kuti ienderane nematambudziko ekuva imwe yezvakakurumbira zvekugovera
Manjaro nenharaunda yayo inopa dzakasiyana shanduro dzakanangana nemusanganiswa wakasiyana wesoftware.
Manjaro chinja chimiro chesangano kuramba uchichinja. Iyi Arch Linux yakavakirwa kugovera, Yakatanga makore masere apfuura sevanhu-vatatu vehunyanzvi chirongwa. Nhasi ndeimwe yeakakurumbira ekuparadzirwa kweLinux.
Nekudaro, nekukura, mabasa ekudhinda yega yega vhezheni inova yakaoma uye haigone kuenderera ichibatwa sepakutanga. Imwe nguva yapfuura vakataura zvimwe zvakafanana Linux Mint vagadziri
Ndokusaka ivo vakatanga vakatanga kutsvaga dzimwe nzira
1 Nzira iyo Manjaro inoshandura chimiro chayo
2 Hukama nenharaunda
3 Basa rekambani nyowani
Nzira iyo Manjaro inoshandura chimiro chayo
Shanduko huru idzi mbiri:
Mari dzese dzinowanikwa kubva kuzvipo dzinozoitwa neasina purofiti ndiani achange achitarisira kuzviwana nekutarisa kunyorera kwavo.
Manjaro GmbH & Co KG inogadzirwa. Iri mubatanidzwa uchave mutariri wekuhaya uye kubhadhara vanoshanda venguva yakazara uye kubhadhara mihoro. Iwe zvakare uchazotsvaga uye kushandisa mitsva bhizinesi mikana.
Zvinangwa zvinotsvakwa neiyi shanduko ndeizvi:
Tora vagadziri vanoita nguva yakazara neprojekti.
Zvirinani kudyidzana nemamwe masangano pazviitiko zvine chekuita neLinux.
Kuona rusununguko rweManjaro sebasa renharaunda uye panguva imwechete chengetedza iyo mhando.
Ivo vanopa nekukurumidza kuchengetedzeka kugadzirisa uye mhinduro inoshanda kune izvo zvinodiwa nevashandisi.
Wana nzira yekuita sekambani yehunyanzvi.
Ivo vane tarisiro yeprojekti vanotsvaga chengetedza kuti chinangwa chaManjaro nezvinangwa zvinoramba zvakangofanana kupfuura pakutanga: kutsigira kusimudzira kwekubatana kweManjaro nekushandisa kwakawanda. Kuenderera mberi uku kucharamba kuchitsigirwa kuburikidza nezvipo uye nerubatsiro izvo, chero zvakadaro, hazvizoshandiswa nekambani yakasimbiswa.
Kuchengetedza huripo mari yeprojekti uye zvipo zvemunguva yemberi, rutsigiro rwemasangano maviri arikutsvaga; NharaundaBridge uye OpenCollective. Nhengo dzechikwata dzinogona ipapo kubvumidza kushandiswa kwezvipo kubhadhara, semuenzaniso, mari inoenderana neprojekti. Pakati pavo:
Kutsigirwa kwechikwata cheManjaro uye zviitiko zvemunharaunda.
Mari yekubhadhara mari yemunharaunda.
Kubhadharwa kwehardware uye kubata mari
Kutenga matikiti ekupinda zviitiko.
Nharaunda Initiatives Grant
Basa rekambani nyowani
Kuti ugone kutora chikamu muzvibvumirano zvebhizinesi, kuumba kudyidzana uye kupa mabasa ehunyanzvi, chimiro chepamutemo chakaumbwa: Manjaro GmbH & CoKG. Iri sangano rinosanganisira Blue Systems mune rezano basa.
The company Iwe uchakwanisa kusaina zvibvumirano uye kuvhara zvisungo uye zvivimbiso zviri pamutemo. Zvinhu izvo zviri muchimiro chenharaunda hazvigone kufungidzirwa kana kuitirwa basa nazvo.
Chimwe chezvinangwa zvikuru zvekugadzirisa ndechekuti kugadzirisa zvivakwa uye kuramba uchishanda pakugovera zvakakosha uye zvinodiwa sehunyanzvi hwekuyedza. Zvakare wedzera huwandu hwevanoroja vanogadzira
Iyo yenguva refu chinangwa cheiyo bhizinesi bhizinesi zviitiko ndezve kuva unozviriritira mune zvemari, nekudaro kuve nechokwadi chekuita kweprojekiti yese uye nharaunda. Iyo kambani ichavawo nezviratidzo zveEU neUS uye ichaita kudzivirira kushandiswa kusingabvumirwe kweManjaro sechiratidzo.
Mitemo yekambani inovimbisa izvozvo iro zita Manjaro rinogona kugara richishandisirwa nharaunda, uku uchidzivirira kukuvara kweprojekiti nekubatana zvisiri pamutemo kana kunyepa neManjaro nekushandisa mukurumbira wayo wakanaka.
Manjaro kugoverwa kweLinux kunoenderana neArch Linux. Kugoverwa uku kunogona kushandiswa nevashandisi vemberi uye vevashandi. Imwe yemaitiro ayo ndeyekupa otomatiki maturusi ayo anofambisa kuiswa kweanoshanda system, madhiraivha uye zvirongwa.
Munguva pfupi yapfuura, nharaunda yako yakabatanidzwa mukukakavadzana pamusoro pechisarudzo chevanogadzira chinzvimbo cheakavhurika sosi hofisi suite LibreOffice neyakavanzika Softmaker FreeOffice. Takatarisana nekuratidzira, danho rakaitwa rekuti vashandisi vanogona kusarudza mumwe wevaviri panguva yekumisikidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Manjaro inoshandura dhizaini yayo kuti ienderane nematambudziko ekuva imwe yezvakakurumbira zvekugovera
LXLE 18.04.3 iri pano kuchengetedza iwo matimu ekare ari vapenyu nezvishoma zviwanikwa
Vintage Nhau - Inowedzera chikafu chakaparadzwa, kuchengetedzwa, uye zvinowoneka zvinoonekwa